Microsoft na-eweta Cortana na mkpọchi ihuenyo nke gam akporo ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Nseta ihuenyo MSPoweruser
Microsoft na-arụ ọrụ iji nweta Cortana zuru oke na gam akporo, na otu sitere na ụmụ okorobịa si Redmond bụ ịrụ ụka adịghị ya na otu n'ime ndị enyemaka kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa. Ọ bụ ihe ijuanya na nke a bụ na mgbe Google nwere ebe nchekwa data na-atọ ụtọ ma n'aka nke ọzọ anyị nwere Siri, nke bụ onye agha ochie na mpaghara ahụ mana ka bụrụ ihe mgbe ochie. N'ezie, ihe kachasị ọhụrụ Microsoft mere iji kwalite Cortana na ngwaọrụ gam akporo bụ iweta ya ozugbo na mkpọchi mkpọchi maka ịdị mfe nke iji ruo max.
Shortzọ mkpirisi bụ ihe anyị ga-agbakwunye na ihuenyo mkpọchi anyị maka Cortana maka gam akporo. Naanị ihe ị ga - eme bụ swiji n’ụzọ ziri ezi, dị ka anyị si eme ngosi iji kpọghee ngwaọrụ ahụ na onye ọzọ iji malite, dịka ọmụmaatụ, igwefoto. N'ezie, ọrụ a ka dị na beta, ma n'ezie ọ gaghị eru iOS, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume gbanwee ihuenyo mkpọchi iOS. Gịnị ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịgbakwunye maka Apple sistemụ arụmọrụ bụ Editable Wijetị na mkpọchi ihuenyo, nke ga-enwe ọtụtụ uche, dịka Shazam nwere dịka ọmụmaatụ.
Ozugbo arụnyere Cortana na gam akporo, ọ ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ ime ka ọrụ a rụọ ọrụ "Cortana na mkpọchi ihuenyo", anyị agaghị eme ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ, akara Cortana ga-apụta na ngalaba ahụ, n'otu ụzọ ahụ ndị ọzọ si apụta, na-enweghị isi mgbanwe mgbanwe na ịba uru ma ọ bụ imewe.
Dị ka anyị kwuru, ọ dị mkpa na Microsoft si otú a na-akwalite onye inyeaka ya na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ nke na-enye ohere ka nnwere onwe dị ka gam akporo karịsịa ugbu a na Windows 10 Mobile dị na doldrums ma na-agụta ọnwụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Microsoft wetara Cortana na mkpọchi ihuenyo nke gam akporo ọ bụla
Javier Huseby kwuru dijo
Ọ dị ezigbo mma mana Spanish mgbe ọ bịarutere
Zaghachi Javier Huseby
Sony n'etiti ndị mbụ ka akwadoro ya maka MWC 2017